NEPAL POLITY: अझै बुझ्ने र चेत्ने बेला भएन ?
Posted by NEPAL POLITY at Thursday, August 05, 2010
सबै ले आ आफ्नो डम्फु बजाउन मस्त छन् . हामीले एकपटक चुनाब गर्ने मौका नदिने हो भने यो देश ले अर्को माओबादी को दश बर्षे जनक्रान्ति भन्दा पनि चर्को क्रान्ति निम्त्याउन सक्छ . त्यो भनेको राजनीतिक भन्दा पनि बाहिर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रान्तिले बेरेको मुसुल्धारे क्रान्ति पनि हुन सक्छ . त्यसकारण अहिले मुलुक लाइ निकाश को बाटो दिन जरुरि छ. होइन भने नेपाल कहिलेपनि अगाडी बढ्ने छैन .